I-Binance Coin (BNB): Ithokheni lendabuko lokushintshaniswa okukhulu kakhulu kwe-crypto emhlabeni - iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » I-Binance Coin (BNB): Ithokheni lendabuko lokushintshaniswa okukhulu kakhulu kwe-crypto emhlabeni
Tag: BEP, Binance, uhlamvu lwemali, I-Binance DEX, Isiphakamiso seBinance Evolution, I-Binance Launchpad, Blockchain, BNB, I-BNB Coin Burn, DEX, I-Launchpad, IStablecoin fiat
Isikhathi sokufunda: 10 imizuzu
Binance kuhola phambili ezingxenyeni eziningi. Ngaphezu kokunwetshwa kwabo emakethe, baphinde bandise ukuthuthukiswa kweprotocol ngokwethulwa kohlamvu lwemali lwabo lwendabuko lweBinance, iBNB Binance Coin, ku-2017 manje osekude ngobuchwepheshe.
Yini i-Binance Coin?
I-Binance Coin (BNB) yizinto eziningi. Ithokheni yokusetshenziswa esetshenziselwa ukuhweba ama-cryptocurrensets, umthetho olandelwayo wokuthuthukisa ukudala ama-dapp kanye nokukhipha amathokheni, imali "yomvuzo" ekhuthaza bobabili i-HODL (ebambe i-crypto ngaphandle kokuyithengisa) futhi iyathengiswa. Ukwamukelwa kwe-BNB kukhula ngesilinganiso esifanayo ne-Exchange uqobo.
Ingabe likhona ithuba lokuthi lokhu kukhula kuzokwehla futhi i-BNB izoba uphawu olunokusetshenziswa okuncane? Kule ndatshana yokubukeza uhlamvu lwemali lweBinance ngizozama ukukufundisa ngayo. Sizobheka futhi namanani entengo yesikhathi eside we-BNB namathemba okukhula.
Kuyini iBinance Coin (BNB)?
Isebenza kanjani iBNB?
I-BNB Coin Burn
Umlando wentengo we-BNB
Ukuhweba nokubamba (ukongiwa) kwe-BNB
Ukuthuthukiswa kweBinance Chain
Izinhlelo zesikhathi esizayo zeBinance Coin
I-Draining Synthetic Grass 7mm Amasayizi angu-50 Atholakala Ngobude Imitha elingu-1 noma Amamitha angu-2 Utshani Bokwenziwa Ikhwalithi ephezulu engu-100% Yenziwe e-Italy (1 × 1 Imitha)
Ngaphambi kokuthi sikunikeze umbono wokuthi iyini imali yakwaBinance, ake sibheke masinyane i-Exchange lapho ikhishwe khona. IBinance njengamanje ingukushintshana okukhulu kunakho konke kwe-idijithali yemali emhlabeni, ngevolumu yokuhweba cishe $ 1 billion njalo ngosuku. Uma sicabanga ukuthi yazalwa kuphela maphakathi no-2017 .. ngomhla ka-14 kuJulayi 2017 ukuze kuqondwe kahle. Ubhalisela i-Binance mahhala, futhi ungakwenza kusuka kulesi sixhumanisi ukuthola i- Isaphulelo se-20% kumakhomishini, kuze kube phakade.
Izinhlamvu zemali zeBinance (Binance Coin) zingamathokheni asetshenziswa endaweni yesikhulumi seBinance, ngakho-ke noma zidayiswa emakethe futhi inani lazo liyashintshashintsha, ngokwesiko lokho umuntu angakucabanga njenganoma iyiphi imali, njenge-Euro noma iBitcoin. Ukusetshenziswa kwayo kuguquguquka kakhulu, akumangalisi ukuthi intengo yayo iqhubeke nokunyuka.
Umthombo: Ibhulogi yeBinance
I-Binance Coin ingenye yezinto eziningi the Altcom, futhi ngenkathi idalwa ibisuselwa kuzinga elijwayelekile le-ERC-20, kusetshenziswa ifayili le- Inethiwekhi ye-Ethereum ne-blockchain yayo. Kufanele kukhunjulwe, ngoba kusho ukuthi uhlamvu lwemali nalo lulandela imithetho ebekwe ngumphakathi ukulawula i-Ethereum blockchain. Okubaluleke kakhulu, kepha ivumela iBinance Coin ukuthi izuze kwi ukuzinza nokuphepha ukuthi i-blockchain nenethiwekhi ye-Ethereum idale ngokuhamba kwesikhathi. Ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuthi izinhlamvu zakho zemali zebiwe ekuhlaselweni okuthile ngoba zivikelwe, zakhiwa e-Ethereum.
Konke kushintshe ngo-Ephreli 2019, lapho I-Binance ihambise i-BNB yayo i-mainnet. Ngaleso sikhathi, baphinde bashisa amathokheni we-ERC-5 BNB wezigidi ezinhlanu futhi babela inani lawo elihambisanayo lamathokheni endabuko e-BEP-20 kuma-wallet awo.
Ngaleso sikhathi uBinance wayekhuthaza abasebenzisi bayo ukuthi baguqule amathokheni abo e-BNB ERC-20 abe amathokheni endabuko e-BEP-2, kepha okwamanje uBinance usasekela amathokheni e-ERC-20 futhi abasebenzisi basakwazi ukuwaguqula abe ngamathokheni e-BEP. 2, yize kungeyona isikhathi eside kungenzeka ukuhoxisa amathokheni we-ERC-20.
IBinance's Blockchain ibuye iguquguquke kakhulu: idala amathokheni amasha ukwenza amafa akhona afakwe kwidijithali, ukuthumela, ukwamukela, ukugoba noma ukushisa, ukubandisa noma ukuvula amathokheni.
Ungabuka futhi imakethe ye-DEX ukuqinisekisa intengo nomsebenzi wemakethe wezimpahla ezithile, uhlole umlando wokuthengiselana namabhulokhi ku-blockchain, ngeBinance Chain Explorer.
Ingasaphathwa eyokuthi ungaphinde uthumele enye idatha ye-Binance Chain nge i-node ephelele ye-API, ukuthuthukisa amathuluzi nezinhlelo zokusebenza zokusiza abasebenzisi ukuthi basebenzise i-Binance Chain ne-Binance DEX futhi, futhi, bathumele futhi bamukele amathokheni we-BNB.
I-Binance Chain isebenzisa inguqulo eguquliwe yesivumelwano se-Tendermint BFT. I-Tendermint yadalelwa ukusetshenziswa kufayela le- Inethiwekhi yeCosmos futhi isebenzisa ukwakhiwa okuyisisekelo ukufeza izinhloso eziningana, kufaka phakathi ukuhlinzekwa kwamanethiwekhi namazinga wokuvumelana we-blockchain, kube sengathi kuyipulatifomu lapho kungakhiwa khona izinhlelo zokusebenza ezihlukanisiwe.
Izinhloso eziyinhloko zokwakhiwa kweBinance Chain yilezi:
Akukho ukugcinwa kwezimali: abathengisi bagcina ukulawula okhiye babo abazimele nezimali zabo.
Ukusebenza okuphezulu: i-latency ephansi, ukudlula okuphezulu (umkhawulokudonsa olinganisiwe wangempela) wesisekelo esikhulu sabasebenzisi nokuhweba okuphezulu kwemali. Hlela izikhathi zesekhondi elingu-1 ngebhulokhi ngayinye, ngesiqinisekiso esingu-1 se- ukugcina (isiqinisekiso sokuthi okwenziwe ngeke kushintshwe).
Izindleko eziphansi: kokubili kumakhomishini nangezindleko zokukhokha.
Okuhlangenwe nakho okulula komsebenzisi: enobungane njengeBinance.com.
Ukuhweba okulungile: nciphisa ukugijima ngaphambili ngangokunokwenzeka.
Iyaguquguquka: ikwazi ukuthuthukisa ukuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, izakhiwo nemibono.
Akulungile ukubuza ukuthi yini iBinance Coin, ngoba akuyona imali. Njengophawu olusetshenziswe endaweni yesikhulumi seBinance, lunenjongo ebaluleke kakhulu. Khumbula ukuthi uBinance ukhokhisa imali yokuhweba ngakho konke okwenzayo.
Kuthiwani ngokuyeka ukukhokha imali yokuthengiselana? NgeBinance Coin ungakwazi, ngoba yilokhu okusetshenziselwa kona, ukukhokha amakhomishini ngokushintshaniswa kweBinance.
Esikhundleni sokukhokha imali engu- $ 1 kuyo yonke i- $ 1.000 oyithengisayo (engakwazi ukuhlanganisa futhi ibe yimali engacabangi yabathengisi abasebenzayo), ungamane usebenzise izinhlamvu zemali zeBinance ukumboza imali. Lokhu kwenza iBinance Coins isebenziseke kakhulu futhi ibaluleke kakhulu kubathengisi ekushintshaneni kweBinance.
Nakhu ukuthi kusebenza kanjani: IBinance izonciphisa imali yokuhweba yalabo abafisa ukusebenzisa uhlamvu lwemali lweBinance ngenkathi behweba, eminyakeni emihlanu yokuqala. Futhi kukhona uhlelo lwekhomishini isilinganiselo esilingayo, ngakho-ke ngonyaka wokuqala ungathola isaphulelo esingu-50% kuma-commissions akho usebenzisa i-Binance Coin.
Isaphulelo kumali yokuhweba yabanikazi be-BNB. Umthombo: Binance
Isaphulelo sihlukaniswa ngohhafu njalo ngonyaka, ngakho-ke ngonyaka wesibili isaphulelo singama-25%, ngonyaka wesithathu kube ngu-12,5%, ngonyaka wesine kube ngu-6,75% bese kuthi kowesihlanu nangonyaka odlule isaphulelo sikhishwe.
Lesi saphulelo sibalwa ngokuzenzekelayo futhi sidonswe uma unezinhlamvu zemali zeBinance esikhwameni sakho sokushintshanisa. Uma ungafuni ukusebenzisa izinhlamvu zakho zeBinance ukumboza imali, ungakhubaza futhi kalula lesi sici.
Kepha…. kepha uma isaphulelo siqhubeka nokwehla, ngabe uphawu ngeke lube nalutho ekugcineni?
Njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe behehwa ekushintshanisweni kweBinance bazoletha inani elikhulayo kuhlamvu lwemali, kepha abasunguli beBinance nabo bathole esinye isisombululo sokuvimbela inani lethokheni ekunciphiseni.
Ikota ngayinye bathatha u-20% wenzuzo yabo kumakhomishini bayisebenzisele ukuthenga izinhlamvu zemali futhi "bazishise" noma bazishabalalise.
Le Burn isivele yenzeke izikhathi eziyi-14, nokusha kokugcina kwenzeka ngoJanuwari 19, 2021, futhi bekuyindawo ephakeme kunazo zonke ezake zaqoshwa, lapho kwacekelwa khona amathokheni we-BNB ayisigidi esingu-3,6. Okwesibili ngobukhulu kwaba ngo-Ephreli 15, 2018, lapho uBinance eshisa i-BNB engu-2.220.314.
Ngokuthatha izinhlamvu zemali zisakazwa, uBinance wenza izinhlamvu zemali ezisele zibaluleke kakhulu. Lokhu kuzoqhubeka ukwenzeka kuze kube sekucekelweni phansi ingxenye yokutholakala kwemali, noma i-BNB eyizigidi eziyi-100.
Ngokuhlaziya ishadi le-BNB uzobona ukuthi intengo yohlamvu lwemali inyuka njalo lapho kusha khona (ngaphandle kokuqala, ngoba bekungaziwa ukuthi kuzoza).
UBinance ugubha ukushiswa kwesishiyagalombili. Umthombo: Ibhulogi yeBinance
ILaunchpad ngesinye isiphakamiso esithandekayo esethulwe nguBinance kungekudala. Le yipulatifomu yokukhipha ithokheni ehlukile kuBinance eya ku-Etheruem ICO. Izovumela amaphrojekthi amasha ukuthi akhiphe amathokheni awo ngqo ku-Launchpad.
Lokhu futhi kubaluleke kakhulu kwiBinance Coin (BNB) njengoba izosetshenziswa njengophawu lwendabuko odabeni. Njengoba nje ama-ICO ephakamise i-ETH ekuthengisweni okusekelwa yi-Ethereum, i-BNB izoshintshaniswa ngethokheni ekhishwe yiphrojekthi yokuqongelela imali.
Le ndlela isivele isetshenziswe kahle ngeBitTorrent Token (BTT). Isidingo sasinamandla kakhulu kangangokuba konke ukuthengisa kwaqedwa ngaphansi kwemizuzu engama-20. Kubuye kwaba nokwenyuka kwamanani entengo ye-BNB muva nje lapho kwaziwa ukuthi enye iphrojekthi izosebenzisa iLaunchpad ukukhipha amathokheni ayo: iphrojekthi yeLotch.ai. Lokhu okunye okuqinisekisa ukuthi umsebenzi ozungeze iLaunchpad ungaphakamisa isidingo semali ye-BNB: njengoba abasebenzisi abaningi befuna ukubeka izandla zabo kwi-BNB ukuze batshale imali ku-Fetch.ai, baqhubeka nokuthenga i-BNB ukwenza lokho.
Yize iBinance ingukushintshaniswa okukhulu okuphakathi, basamukele futhi basigcwalisa isicelo sabahwebi sokushintshaniswa okwabelwe amagunya. Mayelana nalokhu bazethule ezabo I-Binance DEX.
Uma ungazi okwamanje, ukushintshaniswa okwabelwe izikhundla (i-DEX) kungukushintshaniswa kwe-cryptocurrency okuvumela ukuhweba ngontanga phakathi kwabahlanganyeli. Akudingekile ukuthumela ama-cryptocurrensets esikhwameni esikhwameni, bese ufaka ama-oda.
Izinzuzo zokusebenzisa i-Binance DEX. Umthombo: Binance.org
I-Binance DEX Impendulo kaBinance yalo mbuzo.
Yakhiwe ngaphezulu kweBinance Chain nempahla yomdabu enikeza amandla ukushintshana kusobala ukuthi iyithokheni yayo ye-BNB. Ezinye zezinye izici zeBinance DEX zifaka phakathi ikhono loku:
khipha amathokheni amasha
thumela amathokheni kwabanye abasebenzisi ngqo ku-DEX
shisa amathokheni njengoba kudingeka
nqandisa amanye amathokheni bese uwancibilikisa kamuva
phakamisa amabhangqa amasha wokuhweba
Thenga i-BNB KWI-DEX BINANCE
Kusukela namhlanje, Mashi 2021, i-BNB is imali yedatha yesithathu enkulu kunazo zonke ngentengo yemakethe enesamba semakethe esingu- $ 41,53 billion. Inani eliphansi lesikhathi sonke sika- $ 0,096109 lohlamvu lwemali lenzeke kungakabiphi ngemuva kokwethulwa kwalo ngo-Agasti 1, 2017. Inani eliphakeme lesikhathi sonke lalisanda kwenzeka, iBNB ishaya u- $ 333 ngoFebhuwari 20. unyaka. Akukubi kulabo abakholelwa emalini.
Ukusebenza kwentengo ye-BNB. Ukubala: coinmarketcap
Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi amandla entengo e-BNB ahluke kakhulu kwabanye abaningi the Altcom ngezimali zemali efanayo. Okokuqala kufanele kubhekwe ukuthi ukushiswa kwemali okuqhubekayo (ukushiswa, ukubhujiswa) kunciphisa ukunikezwa (ngomqondo wokuthi ukutholakala) we-BNB emakethe. Ngakho-ke ukukhuphuka kwesidingo ..
Lezi zinto ezimbili yisona sizathu esenza i-BNB ibingashintshi kangako eminyakeni edlule kunezinye izimali. Ngaphezu kwalokho, bekulokhu kungukuthakazelisa kukaBinance ukuba nemali yomdabu ezinzile oyisebenzisayo njengebhangqa lokuhweba. Lokho kusho ukuthi basanda kukhipha izinhlobo zabo zama-fiat solidcoins - ake sikhulume nge-Binance USD ne-Binance GBP solidcoins.
Sikubonile ku-coinmarketcap: ivolumu nokuchithwa kwemali yeBinance Coin (BNB) kuphakeme impela. Ngokufanayo, iningi lale volumu lenzeka ku-Binance ngokusebenzisa ama-Tether (USDT) nama-Bitcoin pair. Kodwa-ke, i-BNB iphinde ibhalwe kokunye ukuhwebelana okunikeza ukonga okungaphezulu namanani angcono, njengeP2PB2B, Coinsbit, MXC, njll.
Ama-BNB agcinwa esikhwameni semali (isikhwama semali) njenganoma iyiphi enye i-cryptocurrency. Ngaphambilini bezingagcinwa kunoma yisiphi isikhwama esisebenzisanayo se-ERC-20, kepha kusukela kushintshi luka-Ephreli 2019 kuya kumathokheni we-mainnet ne-BEP-2, kudingeka isikhwama esivumelana ne-BEP-2.
Ngenhlanhla, kunezikhundla eziningi ezisekela i-BNB. Uma ufuna ukuphepha okuphezulu ungakhetha isikhwama semali esinjenge-Ledger noma iTrezor. Uma ukhetha isikhwama semali esingasetshenziswa ungasebenzisa i-Coinomi, i-BRD, i-Trust Wallet noma i-Atomic Wallet. IJaxx Liberty nayo isekela i-BNB, njengoba kwenza ezinye izikhwama zemali.
THENGA IZIMALI ZEZIMALI (BNB)
Njengoba iBinance Chain kungumsebenzi ovulekile womthombo siyakwazi ukubheka ngqo ezinqolobaneni zamakhodi abo ukuthola umbono omuhle wezivumelwano nentuthuko eyenzekayo.
Ikhodi yenziwa (amalogi wokuvuselela amakhodi) ayi-barometer enhle yokunquma kahle ukuthi wenziwa kangakanani umsebenzi wezinga leprotocol. Lokhu kwenziwa ku-Binance Chain ku-GitHub eminyakeni emithathu edlule.
Ikhodi Commit binance-chain / docs-site. Umthombo GitHub
Kubukeka njenge-ecosystem enhle kakhulu.
Enye into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi i-repo ye-Binance Evolution Proposal (BEP) ekhombisa ngezansi isebenza kanjani.
I BEP zilingana neBinance Chain neziphakamiso ze-Bitcoin Improvement Proposals futhi ngezinye zezinto umphakathi ongathanda ukuzibona zenziwa.
Kunezinkulungwane eziningi ze-BEP emkhathizwe ongabheka phambili kuzo. Vele, i-ecosystem ebanzi ye-BNB nayo inemephu yomgwaqo eqinile yezinhlelo. Ake sibheke ezinye zazo.
IBinance Coin yayiyithokheni nje esetshenziswa ngokuqinile yokukhokha imali yokuhweba lapho iqala ukusebenza, yize abanye bethi ukuqagela ezimakethe ezivulekile zemali kwenza imali yedijithali ngokwayo.
Lokhu ngeke kuhlale kunjalo, noma kunjalo, njengoba iqembu leBinance lihlela ukwandisa kakhulu ububanzi bokusetshenziswa kwemali ye-BNB. Sithanda lokhu futhi kakhulu uma ucabanga ukuthi njengoba intengo ye-BNB iqhubeka nokukhuphuka, futhi ngoba isizinda somsebenzisi esikhulayo sikaBinance sifuna ukusebenzisa uhlamvu lwemali ukonga ezindlekweni zokuhweba.
I-Binance Coin isivele ingasetshenziselwa ukutshala imali kuma-ICO abanjwe kungxenyekazi yeBinance Launchpad, enikeza abaphathi be-BNB indlela yokwenza imbuyiselo ezinhlamvwini zabo zemali. Lawa ma-ICO afake iSinkwa, i-BitTorrent, i-Elrond, i-WINk, i-Kava, namanye amaphrojekthi we-blockchain. Ukutshalwa kwezimali kweBinance Launchpad's BNB kuphumelele kahle kuze kube manje, okunikeza ithokheni le-BNB inzuzo eyengeziwe.
Amaphrojekthi asebenzisa i-Binance Coin
Ngokwalo mqondo, njengoba izimakethe ezanda ngokwengeziwe zivuma ukuhweba izinhlamvu zemali ezintsha, cishe uzobona ukwanda kwesidingo seBNB ukuze sizinike amandla.
Njengamanje okunye ukusetshenziswa kwe-BNB ukukhokha izindleko zokuhamba nabathengisi abakhethiwe e-Australia, bakhokhe isikweletu se-Crypto.com sekhadi lesikweletu, bathenge izipho ezingokoqobo endaweni yesikhulumi saseMithril, bakhokhe noma yini ezitolo abazisebenzisayo.uhlelo lwe-XPOS PundiX nezinye eziningi isebenzisa. Kuyiqiniso, okuningi kwalokhu kuboshelwe kuzingxenyekazi ngazinye, kepha njengoba ukusetshenziswa kwanda, uhlelo lwe-BNB luzoqhubeka lukhula futhi.
Njengoba uBinance eqhubeka nokukhula futhi engeza izici ezintsha, kucishe kuqiniseke ukuthi inani lezinto ezingenziwa ngezinhlamvu zemali zeBinance lizokhula.
Akufanele ikhohlwe ukuthi sekuvele kungenzeka ukuhweba ne-BNB njengomqageli, uzama ukungena ngentengo ephansi bese uthengisa ithokheni ngentengo ephezulu, njengalokhu abaningi besenza kakade! Noma ngubani oqale isikhashana esedlule ubonile imali eningi. Qaphela kakhulu ukungena manje njengoba ucezu lude kangako.
Akunakuphikwa ukuthi isiphetho semali yaseBinance sihlobene kakhulu nokusebenza kweBinance ngendlela yayo ye-Exchange. Ngenkathi iBinance isusa kancane kancane isaphulelo semali yokuhweba ngokusetshenziswa kweBinance Coin, ibuye ithole ezinye izindlela zokwenza imali ibaluleke kakhulu.
Njengokushisa, ukushisa, ukubhubhisa ukunikezwa kwezinhlamvu zemali nokwakha i-Exchange esetshenziswayo esebenzisa uhlamvu lwemali lweBinance njengemali yakhona yendabuko. Ukusetshenziswa kwesikhathi esizayo kwama-BNB kuzokwenza ukuthi kube lusizo ngokwengeziwe futhi kuqhubekise ukufunwa kwemali.
Vele, amandla okukhuphuka kwenani kuhlamvu lwemali lweBinance ancike empumelelweni kaBinance njenge-Exchange. I-Binance ayizuzi impumelelo, iyayihlanganisa.
4.4 kuzinkanyezi ezi-5(30)
44,90 € (kusukela ngomhla ka-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziFuthi zingaphansi kokushintsha. Noma yiluphi ulwazi ngalolu daba luyatholakala ku-Amazon.com, njengoba kusebenza ngesikhathi sokuthenga.)
4.4 kuzinkanyezi ezi-5(1597)
49,90 € (kusukela ngomhla ka-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziFuthi zingaphansi kokushintsha. Noma yiluphi ulwazi ngalolu daba luyatholakala ku-Amazon.com, njengoba kusebenza ngesikhathi sokuthenga.)
4.5 kuzinkanyezi ezi-5(11569)
I-SOLFAC Bayer, Ijeli Yephela, Isibulala-zinambuzane, Isilungele Ukusetshenziswa, Ne-Precision Spout, Isicelo Emifantwini nasezindaweni Ezifihliwe, 20g
4.6 kuzinkanyezi ezi-5(5866)
16,35 € (kusukela ngomhla ka-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziFuthi zingaphansi kokushintsha. Noma yiluphi ulwazi ngalolu daba luyatholakala ku-Amazon.com, njengoba kusebenza ngesikhathi sokuthenga.)
3.9 kuzinkanyezi ezi-5(62)
6,39 € (kusukela ngomhla ka-02/07/2022 19:15 GMT +00: 00 - Olunye ulwaziFuthi zingaphansi kokushintsha. Noma yiluphi ulwazi ngalolu daba luyatholakala ku-Amazon.com, njengoba kusebenza ngesikhathi sokuthenga.)
Isihloko sangaphambiliniKwenziwa kanjani Ukuhweba Kwemajini (nge-LEVA) ku-Binance?
Isihloko esilandelayoIsaphulelo kumali ye-Binance